Shirweynihii Beesha Absame oo Soo Gabogaboobey iyo Hogaan Cusub oo la Doortey – Rasaasa News
Shirweynihii Beesha Absame oo Soo Gabogaboobey iyo Hogaan Cusub oo la Doortey
Apr 14, 2009 Somali Ogaden
Shirweynihii shanaad ee beesha Absame ee dalka K/Afrika ayaa soo gabogaboobey, isla markaasina lagu magacaabay maamul cusub oo badalaya kii soo shaqaynayay 13 sanno, Sheekh Cabdullaahi Ubax ayaa noqonaya gudoomiyaha cusub ee Xariirka caalamiga ah ee Absame (Absame International Link) (AIL).
Kadib maalmo shirar isdaba joog ah, xusul duub iyo xarakaad aan la qayaasi karin ay hareeyeen xaafada ay Soomaalidu degto ee Korsten ee Port Elisaberth, ayaa ugu dambeyntii lasoo gunaanaday shirweynihii shanaad ee beesha Absame ee Koonfurta Afrika, laguna magacaabay hogaan cusub oo ay beesha yeelato.
Shirka waxa uu furmey maalintii sabtida, laakiin wuxuu u socdey si hoose oo aan saxaafada loogu tallo galin, kolkii la’isku soo wada afgartay dhamaan qodobadii shirka lagu ansixin lahaa ayaa isniintii saacado kooban hool weyn la’isugu keeney inka baddan 5 boqol oo qof, kadibna lagu dhawaaqay maamulka cusub oo ay soo xuleen guddi farsamo oo u baddan dadka la magacaabay.
Hogaanka cusub ee Absame K/Afrika
Gudoomiye: Sheekh Cabdullaahi Ubax
Ku xigeen: Xaaji Cabdiraxmaan Santoore
Afayeen: Caqiil Sheeikh Yuusuf
Xog-Haye: Abdirashiid Ibraahim
Xubin: Gacmo Gaab
Xubin: Ibraahim Goon
Xubin: Cabdifataax Saadiq
Xubin: Qaasim Boosh Cali
Gudoomiyaha Western Cape: Cali Sheekh Xassan [Cali Yare]
Ku xigeen: Maxamed Caadil
Gudoomiyaha Gauteng: Bashiir Cabdullaahi
Gudoomiyaha Eastern Cape: Qaasim Boosh Cali
Ku xigeen: Cabdifataax Saadiq
Shirweynaha waxaa qudbad si weyn loosoo diyaarshey ka jeediyey Ugaas Maxamed Cabdi Diiriye (Ugaas Qooqaani), oo isaga muddo 13 sanno soo hayay xilka isla markaasina lagu xasuusto waxqabadkii lama hilmaamaanka ahaa ee uu beesha usoo qabtay, Ugaaska qudbadiisa waxa uu kaga hadlay waxyaalihii usoo qabsoomey iyo waxyaalihii aan u qabsoomin, wuxuu sheegey in midnimada reerka ay tahay muqadas, wuxuuna dadka kula dardaarmey in la nabad galiyo, wanaagna lagula dhaqmo beelaha kale ee walaalaha ah.
Mar aan wax ka weeydiiney Ugaas Qooqaani qorshaayiisha ayuu noo sheegey in uu go’aansaday in uu ka nasto hoowsha baaxada leh ee uu hayay, wuxuu yiri “beeshani wanaageeda waxbaddan ayaan usoo qabtay, iminkana wali waxaan balan qaadayaa in aan danteeda ka shaqeeyo, laakiin wixii hadda ka dambeeya waxaan doonayaa in reerkeeyga aan waqti la qaato oo aan nasto”.
Waxaa kulanka sidoo kale ka hadlay gudoomiyaha cusub Sheekh Cabdullaahi Ubax, oo ku baraarujiyey muhiimada midnimada, dadkii kale ee hadlay waxaa ka mid ahaa xaaji Cabdriraxmaan Santoore (gudoomiye ku xigeenka) Cabdifataax Saadiq, Qaasim Boosh Cali iyo akhyaar kale.
Cumar Saalax (Cumar Bantu) waa mid ka mid ah ka qeybgalayaasha shirweynaha, waxa uu uu ii sheegey in uu ku faraxsanyahay sida ay wax u dhaceen, wuxuu u mahad celiyey gudoomiyihii hore Ugaas Qooqaani oo ku tilmaamey hogaan isaga oo kale aan la arki doonin, waxa uu hogaanka cusub u rajeeyey shaqo wanaagsan, dad kale oo aan waraystey ayaa iyaguna si la mid ah ii sheegey.
Wallow guud ahaan beesha ay muujisey midnimo aan la qayaasi karrin, haddane xilalka hogaanka beesha ma noqon mid ku yimaada si dhib yar, markii la ogaaday in uu Ugaas Qooqaani xilka ka dagayo ayaa waxaa biloowdey xusul duub xad dhaaf ah, taasoo ah dabeecad raga lagu yaqaano caadi ahaan, gaar ahaan bulshada Soomaalida.
Dhanka kale wallow si guud loo dul maray, haddane sidii la filayay shirweynaha laguma soo hadal qaadin qodobo waaweyn, gaar ahaan arrimaha Soomaaliya , waxayna u muuqataa in hogaanka iminka la doortey loo igmaday ka baaraan dagista howlahaasi iyo siyaasadii laga qaadan lahaa, ma jirro wax baaq ah ama bayaan ah oo iyadana laga soo saarey shirka.
Si kastaba shirweynahani wuxuu ahaa mid muhiimadiisu ay ku koobneyd magacaabista hogaan cusub taasoo ahayd waxa qofka kasta maankiisa ka guuxayay.
Cabdinaasir Axmed Sh. Bashiir [Saxansoxo]
Email: saxansoxo1@hotmail.com , Port Elisabeth
Shir ka Dhacay Nairobi
Doqontu Qiiq Kama Kacdee Daankay Meermeerisaa